Madaxweynaha Hirshabeelle oo ku dhawaaqay inuu heshiis la galay dowladda Federaalka – Radio
September 19, 2018	87	Like
Waxaa uu ugu baaqay dowladda Federaalka inay wada hadal la furto dowlad goboleedyada.
Warar ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in wada hadalo socday muddo afar cisho ugu dambeyn xalay la isku afgartay wixii khilaaf iyo tabashooyin jiray la xaliyo, iyadoo wada hadaladaas ay qeyb ka ahaayeen Madaxweynaha Hirshabeelle, Madaxweyne kuxigeenka, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxda dowladda Federaalka, sida Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumadda.
Hadalka ka soo yeeray Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ah mid lama filaan ah, marka loo eego halka markii hore maamul goboleedyada ka taagnaayeen khilaafka dowladda Federaalka oo maalmihii la soo dhaafay sii xumaanayay, isagoo ka laabtay go’aankii uu kula mowqifka ahaa maamul goboleedyada ee ay ku hakiyeen wada shaqeyntii dowladda Federaalka.
8-tii bishan ayay aheyd markii shir ay magaalada Kismaayo ku yeesheen Madaxda dowlad goboleedka kaga dhawaaqeen inay hakad geliyeen wada shaqeyntii dowladda Federaalka, iyagoo eedeymo fara badan u soo jeediyay.
Diyaarad dagaal oo duqeeyay Iskuul iyo Isbitaal ku yaalla Saakow
Diyaarad dagaal ayaa la sheegay in duqeyn ka geystay Iskuul iyo Isbitaal ku yaalla degmada ...